Malunga nathi-Iqela leTekhnoloji yeNantong Guosheng yeTekhnoloji
IQela leTekhnoloji yeNantong Guantheng (ekuthiwa yiGuosheng Group) inabanikazi abaxhasayo kubandakanya iGuosheng Intelligence Technology, Umatshini weGuosheng Precision, umatshini weGuosheng, iSuzhou Zhonggu, iDawei Precision Technology (indibaniselwano neTaiwan), kunye ne-Investa (Sino-German ukusebenzisana) njl. Iqela laseGuosheng beligxile kwicandelo lokuvelisa oomatshini ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini.
Ishishini lenkampani lisuka kwizinto eziphezulu zokuphelisa izixhobo, ikakhulu kubandakanya ukuphoswa kwentsimbi kunye neendawo ezichazayo zentsimbi, eziye zaphuculwa kwaye zandiswa kwiindawo ezimbini ezinkulu kwiminyaka edlulileyo. Ngokubonelela ngamacandelo eentsimbi ezichanekileyo nezixhobo zomatshini wokuphelisa we-CNC, izixhobo zokubumba inaliti kunye nabavelisi boomatshini bobuchwephesha abanjengeDemagisson Seiki, Canada Husky, Germany Bomag, njl njl. ishishini lokuya kwicandelo lezinye izixhobo zokuphelisa izixhobo njengemishini yokufaka inaliti. Kwangelo xesha, isixhobo sokwenza izixhobo somatshini we-CNC siguqulwa ukusuka kumatshini wesixhobo somatshini sisixhobo esizimeleyo somatshini ogcweleyo, ukuphuhlisa kunye nokuvelisa iziko lemishini ye-CNC ethe nkqo, iziko lemitshini ye-gantry, iziko lemishini elithe tyaba, umatshini ojikelezayo ojikelezayo, CNC lathe, iziko lokuguqula-indawo yokugaya, kunye neziko lokudibanisa ii-axis ezintlanu. Iqela libe ngumenzi oqeqeshiweyo onoluhlu olupheleleyo lwezixhobo zokusebenza komatshini wokusika isinyithi ze-CNC kunye neetekhnoloji ezigqityiweyo zeshishini. Iimveliso zesixhobo somatshini zisetyenziswa kakhulu kwindawo ye-aerospace, ukubumba, iimoto, amandla, ukwakha iinqanawa, oomatshini bobuNjineli, iimveliso ze-elektroniki ze-3C kunye namanye amasimi okwenza. Iimveliso ezincinci, ezinje ngamaziko oomatshini bokukhawulezisa abahamba ngesantya esiphezulu kunye noomatshini bokugaya abathembisayo, zinokutshintsha izinto ezivela kwamanye amazwe, ezithi zikhuthaze uphuhliso lwamashishini asezantsi kunye noqoqosho oluhambelana nemizi-mveliso.
Iqela likaGuosheng lithobela isithembiso seshishini "lokuvuselela ilizwe ngeshishini nokwenza umsebenzi ube yimpumelelo", lithatha "ukuba ngoyena menzi wokhuphiswano wezixhobo ezikrelekrele eTshayina" njengombono weshishini, unamathela kumaxabiso asisiseko "okunyaniseka, umgangatho, ukukhuthala kunye nezinto ezintsha ", kudala ixabiso elikhulu kubathengi, ukwabelana ngezabelo kunye nabasebenzi, amaqabane, izabelo kunye noluntu, kwaye ifezekisa imeko yokuphumelela kwixa elizayo.
Inkampani yabazali iNantong Guosheng Intelligence Technology Group Co, Ltd., inemali ebhalisiweyo eyi-99 yezigidi zeYuan, ishishini lesizwe eliphakamileyo, elinye lamaShishini aphezulu angama-30 kwishishini lezixhobo zaseChina, ishishini labucala elibonakalayo kwiPhondo le Jiangsu amashishini amatsha kwiPhondo le Jiangsu. Inkampani iseke amaziko obuchwephesha bobuchwephesha bephondo kunye nomasipala, iziko lobuchwepheshe be Jiangsu kunye neqela labaphumelele kwizifundo zobugcisa. Ineenjineli ezininzi eziphezulu kunye noochwephesha, kwaye iphumelele iipatent ezininzi zokuzenzela ezizimeleyo. Ezi mveliso ziphumelele ibhaso lesibini leBhaso leNzululwazi yeTekhnoloji ye-Jiangsu, owokuqala nowesibini wamabhaso eNantong Science and Technology Prize. Inkampani yenze iinguqu kwiiprojekthi eziguqulweyo zenzululwazi eziphambili kunye nezobuchwephesha kwiPhondo lase Jiangsu, kunye neeprojekthi eziphambili zezenzululwazi nezobuchwepheshe kwiSixeko saseNantong, njl.